Text Text And Links: Ampitomboin'izy ireo marina ve ny SEO? & Ndash; Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan no manome ny valiny
Text Text And Links: Ampitomboin'izy ireo marina ve ny SEO? - Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan no manome ny valiny
Ny lahatsoratra sy rakibolana miafina dia mamorona ny votoatin'ny tranonkalanao izay saika tsy hita na aiza na aiza ho an'ireo olona mavesatra ilay pejy. Ho an'ny olona mitondra ny mainty hoditra SEO, lahatsoratra miafina dia fomba iray izay mandà ny fitsipiky ny webmasters. Na izany aza, io votoaty io dia azo jerena amin'ny ordinatera, ary izany dia mahatonga azy ho ampahany amin'ny teny fanalahidy ho an'ny fampidirana. Ny soratra miafina dia mamitaka fitadiavana mametraka tranonkala fampahalalana izay mety tsy ao anatin'ny votoatin'ny tranonkala hita maso.
Taorian'ny fanavaozana vaovao tao amin'ny algorithma fikarohana, Google dia afaka mamantatra lahatsoratra miafina amin'izao fotoana izao - criador de sites 2 0. Ny tranonkala dia mety hampidi-doza ny handoa sazy avy amin'ny fanodinana motera. Amin'ny tranga goavana, ny tenimiafin'ny fitenenan-tsavoka sasany dia mety hitarika amin'ny fandikana tanteraka amin'ny data base. Ny tolo-kevitry ny Content Semalt , Natalia Khachaturyan, dia mampitandrina fa ny sasany amin'ireo tranonkala dia afaka mitongilana amin'ny fampiasana io tetika io fa tsy amin'izao fotoana izao.
Ny soratra miafina
Ity fomba famitahana ity dia afaka mampiditra ny votoaty ao amin'ny tranonkala amin'ny endrika tsy hita maso. Ho an'ireo olona manao fanatsarana ny Search Engine, ny lahatsoratra miafina dia tsy afaka manampy ny vohikala rehetra hiantsoana satria azo tsidihana mora foana. Tsy misy fiantraikany amin'ny fikarohana ny tranonkala tahaka ny teo aloha. Ny fomba iray azon'ny olona ampiasaina hanehoana ny rakitra miafina dia amin'ny fanasongadinana ny pejy manontolo. anisan'izany ny votoatin-javatra miafina, izay mety ho hita ao amin'ny hevi-dehibe iray izay ahafahanao manapakevitra sy mametaka azy any amin'ny toerana hafa amin'ny fanivanana.
Misy teknika maro azon'ny olona ampiasaina mba hanafenana ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkala iray. Voalohany indrindra, ny olona sasany dia afaka mampiasa lahatsoratra izay manana loko mitovy eo amin'ny fototra. Noho izany, ity fampahalalana ity dia tsy hita amin'ny olona mijery ny tranonkala. Ny olon-kafa mampiasa solonanarana kely eo amin'ny faritra misy ny tranonkala misy sora-baventy na fampahalalana fanampiny. Ny famadihana ny rakitra amin'ny code na ny zavatra dia afaka manome ny lahatsoratra amin'ny tranokala ho takona.
Ny rohy fitrandrahana dia miseho toy ny lahatsoratra miafina, afa-tsy ny misy permalinks ao aminy. Vokatr'izany, ny mpampiasa tranokala dia afaka mahatsapa ny faritra misy rohy azo henoina izay tsy mazava na hita maso. Ny rohy fialokalofana dia tsy mamorona ny SEO amin'ny tranonkala iray. Ny fifandraisan'izy ireo dia tsy mamela ny sira fifandraisana hanampiana fahefana amin'ny sehatra iray. Ankoatra izany, ny tranonkala dia mety hizaka ny sazy mihatra amin'ny sivily rehefa mahita mpitsikilo amin'ny tranokala fikarohana mitady tsipelina marobe .
Ho an'ny tranonkala iray toy ny tranokala e-commerce hanatanteraka tsara ny laharana, ilaina ny mampiditra votoaty hita fa tsy izay tsy hita. Ny lahatsoratra rehetra maneho ao amin'ny pejin'ny tranonkala dia tokony ho hita amin'ny mpampiasa. Tokony ho hita koa ny rohy rehetra tokony ho hita. Raha hijery ny votoaty miafina ao amin'ny pejin-tranonkala dia azonao atao ny manasongadina ny zava-drehetra amin'ny alalan'ny ctrl + A na ampiasao ny cursor. Raha toa ka manana loko mitovy ihany koa ny lohahevitra, tsindrio ctrl + C ary ataovy ao ny pejy misy rindrankajy maimaim-poana amin'ny fampiasana ny lahatsoratra. Azonao atao ny mamaritra ny votoaty ary koa ny rohy miafina izay mampiseho fa manaiky alalana.